२८ करोड राजस्व छली गर्नेको घर के यस्तै हुन्छ र ? – हाम्रो देश
वीरगन्ज । ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ यो कथन त्यत्तिकै कथिएको होइन रहेछ । कुकर्म गर्ने एक जना त्यसको सट्टामा सजाय भोग्नुपर्ने अर्कैले । यो कथा सुन्दा कुनै चलचित्र हेरेजस्तो भान हुन्छ । उनी हुन्, २२ वर्षीय उमाशंकर रायभर ।
बारा जिल्ला निवासी सुकुम्बासी परिवारमा जन्मिएका छोरा हुन्, उमाशंकर । अहिले उनी २८ करोड राजस्व छलीको आरोपमा कैदीबन्दी जीवन बिताइ रहेका छन् । बाराको परवानीपुर गाउँपालिका– १, गौनहरी टोलको सुकुम्वासी परिवारमा जन्मेर गरिबीको चपेटामा हुर्केका उमाशंकरको कुनै ठूलो महत्वकांक्षा थिएन । उनकै एउटै ध्येय थियो-सुखका साथ परिवार पाल्ने ।
तर, आज उनी काठमाडौंस्थित नख्खु कारागारमा बितिरहेको छ । करोड रुपैयाँको नाम नसुनेका, वर्षभर लाख रुपैयाँ कमाउन धौँ धौँ पर्ने उनीमाथि २८ करोड राजस्व छलीको आरोप छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उमाशंकरमाथि ‘नक्कली, जालसाजी तथा झूटो मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक बनाई राजस्व चुहावट गरेको प्रमाणित भएको’ भन्दै मुद्दा चलाएको छ ।
यदि, उच्च अदालतको आदेशबमोजिम उमाशंकरले ७५ लाख धरौटी तिर्न सकेका भए उनी कैदी जीवनबाट मुक्त हुन्थे । तर, उनले त्यत्ति धेरै रकम कहाँबाट जुटाउन् । ‘जो सोझो उसैलाई घोचो’ भनेझैँ अहिले उमाशंकर यहीँ दलदलमा फसेका छन् । आफूले गर्दै नगरेको अपराध नख्खु कारगारमा भोगिरहेका छन्
को हुन्, उमाशंकर ?
मुलुककै आर्थिक राजधानीको रुपमा चिनिने वीरगन्जदेखि ३ किलोमिटर पूर्व बाराको प्रसौनी चोकदेखि करिब ४ किलोमिटर उत्तरतर्फ सडक छेउमै करिब ५० घरधुरीको सुकुम्वासी परिवारहरुको वस्ती रहेको टोल हो, गौनहरी टोल । त्यही टोलमा १२ धुर ऐलानी जग्गामा खपडाले बनेको कच्ची घरमा हुर्केका हुन्, उमाशंकर । सानैमा आमा गुमाएका उमाशंकरको घरमा बिरामी बुबा, दाजु–भाउजू, श्रीमती र सन्तान छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले दाजु सन्तोष रायभरको कमाईले मात्र घर परिवार चल्न नसकेपछि उनी विगत ६ वर्षअघि मोटरसाइकलको काम सिक्नका उमाशंकर काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए ।
गाउँकै उमाशंकर सहनीको साथ लागेर १६ वर्षकै उमेरमा मोटरसाइकल मेकानिक बन्ने सपना बोकेर काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए, उमाशंकर । सहनीले उनलाई मोटरसाइकल ग्यारेजमा राम्रो काम लगाइदिने आश्वासन देखाएर नागरिकता ल्याउन भने । सहनीसँगै सर्लाहीको गोडैता – ८ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौंको कोटेश्वर बस्दै आएका सरोजकुमार मिश्र पनि उनीसँगै साथमा आएका थिए । राम्रो काम लगाउने भनेपछि उमाशंकरले सहनीलाई भोलिपल्ट नै नागरिकताको फोटोकपी बुझाए । त्यस दिन मिश्र र सहनीले थप कागजात पनि ल्याएका थिए । दुवैले भनेबमोजिम त्यस कागजातमा उमाशंकरले कुनै शंकाविना औंठाछाप लगाइदिए ।
बाराको सरकारी स्कुलमा कक्षा ५ सम्म पढेका रायभरले आफूले ल्याप्चे लगाइदिएका कागजात पनि पढेनन् । सानैदेखि बायाँ आँखामा समस्या भएका उनले राम्रोसँग शब्द र दृश्य पहिल्याउन सक्दैनन् । उमाशंकरका दाजु सन्तोष रायभरले भने धेरै कागजपत्रमा ल्याप्चे लगाएपछि जागिर पाइन्छ भन्नेमा औँधी खुस थिए । तर, कागजातमा औँठा छाप लगाएर हिँडेका सहनी र मिश्र फर्केर आएनन् । सहनीलाई पर्खेर बसेका उमाशंकरले परिवार पाल्न झापाको ट्याक्टर शोरुममा काम गर्न थाले । मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउथे ।
२०७६ मा बिहे भएको उमाशंकरको २०७७ पुसमा छोरी जन्मिइन् । त्यसपछि थप परिवारमा आर्थिक बोझ थपियो । अझ आर्थिक स्थिति मजबुत पार्नुपर्ने भयो । र, उनी झापामै श्रम बगाइरहेका थिए ।
उमाशंकर कसरी कारागारसम्म पुगे ?
२०७७ फागुनको दोस्रो साता । उमाशंकरको घरमा अचानक पाटन उच्च अदालतबाट काटिएको पत्र पुग्यो । ‘राजस्व अनुसन्धान विभागको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध अभियुक्त÷प्रतिवादी तपाईं समेत भएको राजस्व चुहावट मुद्दामा तपाईं समेतका उपर अभियोग पत्र दर्ता भएकाले यो म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र प्रमाण भए सो समेत लिएर तपाईं आफैं यस अदालतमा हाजिर हुन आउनुहोला । अन्यथा मुद्दा कानुन बमोजिम भइ जानेछ, पछि तपाईंको उजुर लाग्ने छैन’ भनेर पत्रमा उल्लेख थियो ।
छिमेकीले उक्त पत्र पढेर सुनाएपछि उमाशंकर परिवार एकाएक छाँगाबाट खसेजस्तो भयो । त्यसपछि परिवारले उमाशंकरलाई झापाबाट बोलायो । त्यसपछि उमाशंकर अरूको नामको पत्र आफ्नो घरमा आएको हो कि भनेर बुझ्न उनी काठमाडौं आए । काठमाडौं आएपछि उनी उच्च अदालत पाटन पुगे । अदालत पुगेका उनले थाहा पाए– ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रा.लि नामक कम्पनीमा आफू प्रत्यक्ष संलग्न भइ जालसाजी तथा झूटा कर बीजक जारी गरी राजस्व चुहावट गरेको भनेर ।
झूटा, जालसाजी तथा नक्कली कर बीजक जारी गरेको तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश करबापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छली गरेको अभियोगमा विभागले १० जना मुख्य अभियुक्त र सात जना मतियारलाई मुद्दा चलाएको थियो । उमाशंकरलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ । मुद्दाबारे बुझ्न आएका उमाशंकर पक्राउ परिहाले । दैनिक ज्यालादारीमा काम गरि परिवारलाई जसो तसो पालन पोषण गरि रहेका उमाशंकरले करोडौं रकम कसरी ठगी गरे त ? सुन्दा पनि जो कोहीले पत्याउने ठाउँ नै छैन ।
दाजु सन्तोष उमाशंकरलाई छुटाउन सकिन्छ कि भनेर अझैँ काठमाडौं धाइरहेका छन् । ‘भाइलाई २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छल्यो भनेर मुद्दा चलाइएको छ । उसले त्यत्रो अपराध गरेको भए हाम्रो हालत यस्तै हुन्थ्यो हो त ? राजस्व अनुसन्धान विभाग, सरकारी वकिल, अदालत ती सबैले के हेरेर/के देखेर मेरो भाइलाई जेलमा कोचेका होलान् ? के अनुसन्धान गरे होलान् ? त्यो पैसा कति हो भनेर हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौं, ठगी कसरी गर्नु ?’
अरुले गरेको गल्तीको सजाय आफ्नो भाईले भोगी रहेको दाजु सन्तोष मन भारी पार्र्दै भन्छन् । ‘गल्ती गर्ने जो कोहीलाई पनि सजाय हुनुपर्छ तर गल्ती नै नगरेका भाईले अनाहकमा कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेको छ ।’ वास्तविक राजस्व छलीलाई पक्राउ नगरी विभागले उनलाई नै मुख्य आरोपी बनाएर कारागारमा पुर्याइदिएको छ ।
उमाशंकरकी श्रीमती सोनम रायभर सुन्दा पनि विश्वास नलाग्ने अभियोगमा राज्यले श्रीमान्लाई कारागारमा थुनेर राखेको बताउँछिन् । ‘करोडौं रकम ठगी ग¥यो भन्ने सुन्दा विश्वास कसरी गर्ने ? भन्दै श्रीमती सोनमले एउटी छोरी हुर्काउन पनि गाह्रो छ, जाडोमा के लगाउने, के खाने समस्या छ, अदालतले कसरी उनीलाई ठग देखेको होला ? के देखेर जेल हालेको होला ? । श्रीमान् जेल चलान हुँदा छोरी दुई महिनाकी थिईन, अहिले एक वर्षकी भईन्, उनी कहिलेसम्म जेलमा बस्ने हुन् भन्दै मैले एक्लै छोरीलाई कसरी हुर्काउन सकुँला !’
जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद !
राजस्व अनुसन्धान विभागले पाटन उच्च अदालतमा उमाशंकर सहित १७ जना विरुद्ध अभियोग दर्ता गराएको छ । अदालतमा पेस भएका कागजात हेर्दा सरोजकुमार मिश्रले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा आफ्ना केही सहयोगीका साथ मिलेर उमांशकरजस्ता युवाको नागरिकता दुरुपयोग गरेर एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम छली गरेको देखिन्छ । उनले प्रोकरस इन्टरनेसनल प्रालि, आरकेएस इन्टरनेसनल प्रालि, अनन्या इन्टरनेसनल, इन्टरसिटी इन्टरनेसनल, ब्लु क्रस ट्रेडर्स, जेन सप्लायर्स, राज एन्ड किशोर इन्टरनेसनल र स्विफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिको बैंक खाता सञ्चालक बनेर तथा एसकेएम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रालिको सञ्चालक बनेर कर छलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
मिश्र नै यो ठगीका मुख्य ‘डिजाइनर’ देखिन्छन् । तर, विभागले अनुसन्धान थालेपछि उनी फरार छन् भने जागिर पाउने आशामा नागरिकताको फोटोकपी दिएका बाराका उमाशंकर कारागारमा छन् । मिश्रले उमाशंकरको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गरी कम्पनी दर्ता गराउनुका साथै सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबारको अख्तियारी लिएर कारोबार गरेको देखिन्छ । जेल सजाय भोगिरहेका उमाशंकरको आर्थिक अवस्था यस्तो छ कि उनी उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जान वकिल पनि खोज्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले उमाशंकर लगायत १७ जनामाथि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाएको छ । तारिख पाएपछि उनी बाटो खर्च खोजेर गत वर्ष फागुन १९ मा पाटन उच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए । न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमले ‘७५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत धरौटी स्वरूप दिन नसकेमा थुनुवा पठाउनू’ भन्ने आदेश दिए । ऐलानीमा बनेको छाप्रोले ७५ लाख धरौटी धान्न सक्ने कुरै भएन, उनलाई अदालतबाटै पक्रेर सिधै नख्खु कारागार पठाइयो ।
उमाशंकरमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंमा ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रालि दर्ता गरी जालसाजी तथा झूटो कर बीजक जारी गरेर राजस्व चुहावट गरेको अभियोग लगाएको छ । यी दुई कम्पनीमार्फत क्रमशः १५ करोड ८७ लाख ७ हजार र १२ करोड ३ लाख गरी २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर छलेको अभियोग उनीमाथि छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उमाशंकरले राजस्व छलेको भनिएको रकम बराबर जरिवाना साथै मुद्दा फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद गर्न माग गरेको छ ।